Sacuudiga oo fududeenaya Dal-kugalkiisa suu usoo jiito Dalxiisayaasha Caalamka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Sacuudiga oo fududeenaya Dal-kugalkiisa suu usoo jiito Dalxiisayaasha Caalamka
Sacuudiga oo fududeenaya Dal-kugalkiisa suu usoo jiito Dalxiisayaasha Caalamka
September 27, 2019 - By: Abdirizak Shiino
Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay inay bilaabeyso Barnaamij cusub oo ay ku fududeenayso dal-kugalkooda (VISA) si ay wadankaasi usoo booqdaan Dalxiisayaasha Caalamka, qorshahan oo qeyb ka ah nidaamka ay doonayaan inay sare ugu qaadaan dakhliga dowlada oo hada intiisa badan ku xiran Shidaalka ay soo saaraan.
Barnaamijkan oo bilaabanaya maanta oo Jimce ah ayaa la sheegay in marka hore lagu bilaabi doono 40 wadan oo aan weli dhamaantood la shaacin, dalalkaasi oo ay ku jiraan reer Galbeedka ay doonayaan inay dalxiis u yimaadaan dalka Sacuudiga.
Waxaa sidoo kale la khafiifiyey sharuucdii lagu xakameenayey haweenka ajaanibta ah sida inay khasab ahayn inuu la socdo nin wakiil ka ah, waxaa sidoo kale loo fasaxay inaysan xiran Jalbaab walow loo sheegayo haweenka inaysan isqaawin karin.
Dhinaca kale waxaa mamnuuc ah in VISA-ha dalxiiska ay Muslimiinta u isticmaalaan booqashada magaalooyinka Makkah iyo Madina oo loo baahan yahay weli inuu qofka ogolaansho ka heysto dowlada.
Wadanka Sacuudiga oo horey VISA-ha siin jiray oo kaliya dadka shaqada, ganacsiga iyo Cibaadada u taga dalkaasi ayaa horaantii sanadkan bilaabay E-visa oo la siinayey dadka wadankaasi u tagaya Bandhig Faneedka iyo Ciyaaraha Caalamiga ah.
Qorshaha lagu soo jiidanayo Dalxiisayaasha ayaa qeyb ka ah Mashruuca Maxamed Bin Salman ee 2030 oo dalkaasi lagu horumarinayo, waxayna Boqortooyada rajeenaysaa in dakhliga Dalxiisayaasha uu gaari doono illaa 100 milyan oo dollar sanadkii.